महिला डाक्टरले टिभी बनाउँन आएको अप्रेटरसँग स’म्बन्ध बनाउँदै गर्दा – Classic Khabar
May 22, 2021 165
एक महिला डाक्टरको जीवन स’माप्त पा’रिएको छ । भारत, उत्तर प्रदेशमा यस्तो घटना भएको हो । त्यहाँको ताजनागरी आग्राको पोश क्षेत्रमा शुक्रवार दिउँसो एक महिला डाक्टरको जीवन स’माप्त पारिएको हो । यो घटनाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा स’नस’नी फैलाएको छ ।परिवारले टिभी ठिक गर्न आएको अपरेटरमाथि आ’रोप लगाएका छन् । यद्यपि प्रहरीले यस स’म्बन्धलाई प्रेम प्रसंगसँग हेर्दैछ ।
प्रहरी नजिकै सीसीटीभी क्यामेरा खोज्दै छ । एडीजी देखि सबै प्रहरी चौकीको बल घटनास्थल पुगेको छ । जानकारीका अनुसार प्लास्टिक सर्जन डा. अजय सिंघल कमला नगर इलाकामा बस्दै आएका थिए । उनको डेन्टिस्ट (दाँतको डाक्टर) पत्नी ३८ वर्षीया डा. निशा र दुई बच्चाहरुसँगै थिइन् । परिवारका सदस्यहरूले भने कि अपरेटर शुभमलाई बेलुका बोलाइएको थियो, जब टिभी केबलको समस्या थियो ।
Next९४ वर्षकि यी बुढी आम जो भुत घरमा एक्लै बस्नुहुन्छ, रातभरि भुतले तर्सार खपिसक्नु पार्दैन (भिडियो हेर्नुस्)